Individual Lending Loan Officer (Monywa) | Early Dawn Microfinance
Individual Lending Loan Officer (Monywa)
Myanmar - Sagaing Division
ဤရာထူးသည် Dawn ၏ တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများကို
ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကောက်ယူရရှိရေး၊ ချေးငွေများထုတ်ပေးရန်နှင့်
ပြန်လည်ကောက်ခံရေး၊ ပြည့်ဝသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေး၊ တစ်ဦးအလိုက် ချေးငွေအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသော လစဉ် နှင့် နှစ်စဉ် လျာထားချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေဒေသအတွင်း တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများ ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး။
ချေးငွေလျောက်လွှာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိပြီး လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ခံရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးကောက်ယူခြင်း။
ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းပရ၀ဏ်နှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။
အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်၍ ၎င်းပေးအပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်စုပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းစာရင်း အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း။
Dawn မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူအသစ်နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ်နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း။
ချေးငွေခွင့်ပြုရန်အတွက် ချေးငွေစီစစ်၊ အကဲဖြတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း။
ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်း။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကို ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျာထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့် ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများအား ပြည့်မှီနိုင်ရန်အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
ကြီးကြပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တစ်ခြားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခြ
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
* Medical Benefits & Insurance
* Working Days => Monday to Friday
Early Dawn Microfinance Company Limited (DAWN) was founded in 2002 asaprogram under Save the Children International. In 2015, it became an independent company and has rapidly grown into one of Myanmar’s largest and leading microfinance institutions, providing high-quality financial services to micro and small business owners. DAWN is registered with the Ministry of Finance & Planning and operates withadeposit-taking license granted by the Financial Regulatory Department.
DAWN isafast-growing company withaneed for talented individuals who share our values (Respect, Excellence, Innovation and Passion for Social Change) to support our growth. We have opportunities across the organization, in the field and at head office. We offer competitive salaries and benefits,adynamic work environment, opportunities for learning, development and advancement, andachance to work withafantastic team.
Are you able to reside in Sagaing Region?
Do you have experience in MFI industry?
Call Center Executive-Support
Domestic Payment Banking Assistant
Payment Assistant (Card Operation)
KBZ Pay Officer
Associate (Banking - Sector)
Associate (Banking Sector)
Trade Finance Support Assistant